Jaaliyadda Puntland ee Columbus Ohio oo si Kulul uga Hadashay Weerarkii Af Urur (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 11, 2017 8:05 b 1
Jaaliyadda Puntland ee Magaalada Columbus Ohio ayaa ka hadashay weraarkii lagu qaaday lagu qaaday ciidamada Puntland ee ku sugnaa tuulada Af Urur oo ka tirsan Gobalka Bari.
Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyeed ee North America ahna Puntland Diaspora Forum Mr. Burhan Mohamed Ahmed oo waraysi siinayeey Radio daljir ayaa marka hore tacsi u diray qoyskii iyo ehelkii ciidankii ku dhintay weraarkaas ay soo qadeen Ciidamo katirsan alshabaab ,isago sheegay in muragada ay la qaybsanayaan shacabka.
Gudoomiye Burhan ayaa ku baraarujiyeey shacabka inay la shaqeyaan dowladda iyo ciidamada amaanka si looga feejignaado kooxda alshabaab ,wuxuuna sheegay in shacabka looga bahanyahay inay gacan siiyaan cidamada amaanka .
Askartii ku dhintay weerarkii Af Urur caruurti ay dhaleen ayuu sheegay Burhan inay wadaan qorshe wax lagu qabanayo oo ay ka shaqaynayaan sidii wax loo tari lahaa.
Hoos ka dhegayso Guddoomiyaha oo u waramay Maxamed Lakiman, Daljir Garowe.
Abdulahi Axmed Maxamed 2 years
Cos jilaal wala ma huran ninba wadankisa buu ka naxaa inaalilahi waa inaa rajicuun waxan ka tacsiyeenayaa askartii lagu xasuqay aflow jaliyadu aad bay uga naxeen askartoodi oo la la yay